China Packaging Tape China Manufacturers & Suppliers & Factory
Packaging Tape - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Packaging Tape)
Bopp vita pirinty vita am-boasary
Bopp vita pirinty vita am-boasary Bopp vita pirinty vita pirinty manisy tombo-kase miloko marefo, hiasa hery hiasa sy lokon'ny fotoana lava mampahatsiahy ny tombo-kase azo antoka mandritra ny rojotra famatsiana. Ny kasety vita pirinty vita pirinty dia afaka mamafa avy hatrany ary tsy misy ambiny Ny kasety...
Fantson-doko fotsy loko
Fantson-doko fotsy loko Ny fantsom-peo miloko dia mampiasa matetika amin'ny fanamboarana vonjimaika, fanisiana tombo-kase, famatorana ny jiro sy ny fanamarihana. Ny fantsom-bazaha fotsy dia mety hifanaraka tsara amin'ny metaly, plastika ary mivaingana, afaka manaisotra mora foana koa izy io. Ny taratasy...
Mamatotra fehin-kofehy vita amin'ny barazy
Mamatotra fehin-kofehy vita amin'ny barazy Te hanao piraika manokana ve ianao, kalitao mateza, mateza ary matevina? Raha eny, jereo eto! Ny kaonty vita amin'ny loko mavokely misy loko dia hamafisina, lanja maivana mandritra ny fifindrana, ny fitahirizana, ny fandefasana ary ny fonosana. Tongava miaraka...
Taratasy fiarovana vinyl mainty mavo fampitandremana mavo
Taratasy fiarovana vinyl mainty mavo fampitandremana mavo Ny piraofy mofomamy be menaka dia amboarina amin'ny alàlan'ny coating malefaka Polyvinyl chloride (PVC). Rakotra fampitandremana mainty sy mavo manelingelina miaraka amin'ny malina mahery setra mampihetsi-po. Ny vinyl fiarovana momba ny fiarovana...
Rakotra volontany famafazana vita amin'ny marika
Rakotra volontany famafazana vita amin'ny marika Packing tape volontany dia safidy tsara indrindra ampiasaina rehefa manangona baoritra, mihetsika sy miafina boaty ho an'ny tanjona ao amin'ny fandaminana. Ny kaonty fandefasana volontany dia mety tsara amin'ny raharaha corrugated, manana adhesive mafy,...
Packaging Tape packaging tape Packing tape packaging paper Opp Packing Tape Bopp Packing Tape Masking Tape Paper Packing Tape